चन्द्रागिरिमा ६५ जना आरडिटी पोजेटिभ, दहचाेक क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरु भन्छन् विभेद भयो - Aarsha Khabar
चन्द्रागिरिमा ६५ जना आरडिटी पोजेटिभ, दहचाेक क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरु भन्छन् विभेद भयो
by Aarsha Khabar ९ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार May 24, 2020
काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिकामा आरडिटी परीक्षणबाट पोजेटिभ देखिएका ६५ जना मध्ये ५६ जनालाई दहचाेकस्थित क्वारेन्टाइन केन्द्रमा राखिएको छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) परीक्षणका क्रममा आरडिटी परीक्षण पोजेटिभ देखिएपछि उहाँहरुलाई नगरपालिकाले व्यवस्था गरेको क्वारेन्टाइनमा राखिएको हो । केही दिन अघि चन्द्रागिरि नगरपालिमा ५ जना कोरोना संक्रमित भेटिएपछि नगरपालिकाले जेठ ३ गते दिउँसो १२ बजेदेखि ९ गतेसम्म नगरपालिका पूरै सिल गरी आरडिटी परीक्षण सुरु गरेको थियो । नगरको १५ वटै वडामा गरिएको आरडिटी परीक्षणको क्रममा पोेजेटिभ देखिएका जनप्रतिनिधि, स्वयम्सेवीका, कर्मचारी र स्थानीयहरु अहिले बलम्बु क्वारेन्टाइन केन्द्रमा छन् ।
बलम्बु क्वारेन्टाइन केन्द्रमा उहाँहरुको अवस्था बुझ्न आर्ष नेपालको टिम त्यहाँ पुग्यो । उहाँहरु मध्ये क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्ति (वडा सदस्य) लाई सोध्दा नगरपालिकाले व्यवस्था गरेको क्वारेन्टाइन नै सुरक्षित नभएको बताउनु हुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘क्वारेन्टाइन केन्द्रमा हुनु पर्ने मापदण्ड नै यहाँ छैन । हाम्रो आरडिटी परीक्षण पोजेटिभ देखिएपनि कोरोना भाइरस संक्रमण भएको पुष्टि भइसकेको त छैन नी । यहाँ बस्दा एउटै ट्वाइलेट, बाथरुम प्रयोग गर्दा यसले झनै विकराल समस्या निम्तन्छ कि भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ ।’
उहाँ भन्नुहुन्छ, चेकजाँचको क्रममा हामीमाथी विभेद गरियो । वडा अध्यक्ष माथि सबैको पीसीआरबाट चेक गरियो, वडा सदस्य र अन्य व्यक्तिहरुलाई आरडिटीबाट चेक गरियो । पीसीआरबाट चेक गरेकाहरुको रिपोर्ट त आइसकेको छैन । उहाँहरु अहिले पनि आनन्दले हिड्डुल गर्ने, व्यक्ति व्यक्तिसँग भेट्ने गर्नुभएको छ । उहाँहरु पनि रिपोर्ट नआउञ्जेलसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्छ या पर्दैन ? ‘हामीलाई आरडिटीबाट चेक गरी यहाँ राख्ने काम गरियो, उहाँहरु आनन्दले बाहिर हिडिरहेका छन् । उहाँहरुले किन आरडिटीबाट परीक्षण गर्नुभएन ? उहाँहरुले ठूला व्यक्ति र साना व्यक्ति भनि प्रमाणित यहीबाट गर्नुभएको छ ।’
अर्का व्यक्ति (वडा सदस्य) भन्नुहुन्छ, यहाँ बस्नु भन्दा हामी घरमै सुरक्षा अपनाएर बसेको भए अझ बढी सुरक्षित हुने थियौं । अपमानजनक रुपमा खाना दिने गरिएको छ । यहाँ पानीको राम्रो व्यवस्था छैन । हिजो देखि साबुन पानीले हात धुनसम्म पाइएको छैन, हातमा सेनिटाइजर मात्र दलेर बसिरहेका छौं । यहाँ अन्यत्रबाट ल्याइएका विरामी पनि राखिएको छ । यही, यसरी नै राख्ने हो भने अझ बढी जोखिम हुन्छ हामीलाई । संक्रमणको तनाब भन्दा पनि यहाँको वातावरणले अरु कुनै रोगको सिकार भइन्छ कि जस्तो लाग्छ । हामीलाई तत्काल थानकोटको क्वारेन्टाइन अस्पतालमा लगियोस् उहाँ भन्नुहुन्छ ।
चन्द्रागिरि नगरपालिकाले अहिलेसम्म ६६६ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को चेकजाँच गरेको छ । जसमा आरडिटीबाट ५६० जना र पीसीआरबाट १०६ जनालाई परीक्षण गरिएको थियो । आरडिटी परीक्षणबाट ६५ जनामा पोजेटिभ देखिएको थियो । पोजेटिभ मध्य ५६ जनालाई दहचाेकस्थित क्वारेन्टाइन केन्द्रमा राखिएको छ भने बाँकीलाई १३ र १४ नम्बर वडाले तयार पारेको वडाको आ–आफ्नै क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।
चन्द्रागिरि नगरपालिकाले संचानलमा नरहेको दहचाेकस्थित मनमोहन मोमोरियल अस्पतालको भवनलाई क्वारेन्टाइन केन्द्रको रुपमा सुरुवात गर्नु राम्रो हो । तर, क्वारेन्टाइन केन्द्रलाई सबैभन्दा पहिले क्वारेन्टाइन केन्द्रको मापदण्ड अनुसार सुधार्न आवश्यक छ । क्वारेन्टाइन केन्द्र बनाइसकेपछि वरिपरिको बस्तिलाई सम्भावित खतराबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ । खुल्ला ठाउँ, त्यही नजिकैको सडक हुँदा त्यसले अर्को दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । जतिसक्दो चाडो क्वारेन्टाइन केन्द्रलाई तारबार लगाउने, बार घेर्ने या अन्य कुनै सुरक्षा नीति अपनाई सुरक्षित बनाउन तर्फ लाग्नु पर्छ । यति मात्र होइन यदि वडाले पनि आ–आफ्नो वडामा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको भए समस्या यतिबेला त्यति भयाबह हुने थिएन । आफ्ना वडाका व्यक्तिहरुलाई वडामै राख्ने व्यवस्था गरिएको हुने थियो भने उहाँहरु अझ बढी सुरक्षित हुने थिए । अन्यत्रबाट ल्याइँका व्यक्ति तथा सबैलाई एकै ठाउँमा राखिदा झनै खतरा हुन सक्छ । केही वडाहरुले आफ्ना वडामा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिसके छन् । अब बाँकी रहेका वडाले पनि तत्काल क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । अन्यथा अर्को ठूलो क्षति ननिम्तेला भन्न सकिदैन । आफु पनि बचौं, अरुलाई पनि बचाऔं ।
आर्यनारी र वटसावित्री व्रत
शनिबार साहित्य विशेष
को–को विदाई भए नेकपा र कांग्रेसका सांसदहरु ?
Aarsha Khabar March 3, 2020 March 3, 2020
लुम्लेमा ५ रेक्टर स्केलको भूकम्प
Aarsha Khabar March 15, 2020 March 15, 2020
चन्द्रागिरि नगरपालिकाले इँट्टा उद्योग हटाउनुको साटो संरक्षण गर्न खोज्यो’
Aarsha Khabar December 17, 2019 December 17, 2019
थानकोट नागढुंगा सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग शिलान्यासमा मेयरको अनुपस्थिति...
Aarsha Khabar October 23, 2019